नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टरार्इको ‘मोरल डाउन’, उनले नेतृत्व छाड्ने इच्छा देखाए-Nepali online news portal
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग चुनावी तालमेल गरी उसैको चुनाव चिन्हमा नयाँ शक्ति पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागि भएको थियो तर मधेशमा समेत नराम्रो संग हार व्यहोर्न पर्यो । नयाँ शक्तिको लज्जास्पद हारपछि आफ्ना निकट मित्रहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा उनी रोएका छन् ।
काठमाडाैं/स्थानीय निकायको पहिलो र दोश्रो चरणको चुनावमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा नै उनको पार्टीले लस्सापद हार व्यहोरेको छ । पछिल्लो समय भट्टराईको ‘मोरल डाउन’ भयो ।
डा. भट्टराईको क्षेत्रको पालुङटार नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपकबाबु कँडेल विजयी भएका थिए । पालुङटारमा भट्टराईको पार्टी तेस्रो बन्यो । भट्टराईको पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनबाट अशोक देवकोटा मेयरका उम्मेदवार थिए । तर, उनी माओवादी केन्द्रका विवश चिन्तनभन्दा पनि पछि परे ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ को अवधारणाबमोजिम सहरी क्षेत्रमा समेत उनले पकड जमाउन सकेका छैनन् । त्यसैले, दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि उनले लिने रणनीतिले पार्टीलाई सशक्त ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन हेर्न बाँकी नै छ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीले मधेशी दलहरुको एकीकरणपछि बनेको राजपासँग मिलेर चुनाव लड्ने घोषणा गरेको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग चुनावी तालमेल गरी उसैको चुनाव चिन्हमा नयाँ शक्ति पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागि भएको थियो तर मधेशमा समेत नराम्रो संग हार व्यहोर्न पर्यो । नयाँ शक्तिको लज्जास्पद हार पछि आफ्ना निकट मित्रहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा उनी रोएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमतको परिणामले गर्दा बाबुरामले पार्टीका नेताहरुसंग अनपेक्षित प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व नै छाड्ने इच्छा देखाएका छन् । नयाँ शक्ति निकट श्रोतका अनुसार बाबुरामले उनीभन्दा तल्लो तहका नेतालाई बोलाएर केहि दिन अघि मात्र नेतृत्व लीइदिन आग्रह गरेका थिए ।
माओबादी पृष्ठभूमिका दुई नेता देबेन्द्र पौडेल र गंगा नारायण श्रेष्ठलाई भट्टराईले यस्तो आग्रह गरेको चर्चा नयाँ शक्ति पार्टीमा चुलिएको छ । नयाँ शक्ति निकट श्रोतका अनुसार बाबुरामले पौडेल र श्रेष्ठलाई ६ महिनाका लागि पार्टी नेतृत्व लिईदिन आग्रह गरेका हुन् । बाबुरामले ६ महिना युरोपको विकास मोडल अध्ययनका लागि आफुलाई समय चहिएको भन्दै पार्टीका नेताहरुसंग यस्तो आग्रह गरेको कुरा आजको साँघु पत्रिका लेख्छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीले अपेक्षित आकार लिन नसकेपछि पार्टीको एउटा समूह विकल्पको खोजीमा लागेको छ । विशेष गरेर माओवादीबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नयाँ शक्ति पार्टी अब नबन्नेमा ढुक्क छन् ।
स्रोतका अनुसार, यस्तो निष्कर्षमा पुगेका पूर्वमाओवादीहरुको नेतृत्व नेता देवेन्द्र पौडेलले गर्दै आइरहेका छन् । पौडेलले यस्तै निष्कर्षमा पुगेका नेताहरुसँग माओवादी केन्द्रमा जाने विषयमा नै छलफल गरिसकेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचअघि नै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने गरी पौडेलले छलफल अघि बढाए पनि प्राविधिक कारणले रोकिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, माओवादीबाट आएको एउटा समूहले छिटोभन्दा छिटो माओवादीमा जान पौडेल समूहलाई दबाब दिइरहेको छ । केही समयअगाडि एमाओवादी केन्द्रीय समिति परित्याग गरेका तीन नेता आत्मालोचना गर्दै पार्टीमा फर्केका छन् । पार्टी परित्याग गरेका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले थालेको नयाँ शक्ति अभियानमा सहभागी हुने भन्दै पार्टी त्यागेका उनीहरु फेरि एमाओवादीमै फर्केका हुन् ।